के तपाई आफ्नो म्याकमा नाईट शिफ्ट प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ? हामी तपाईंलाई कसरी देखाउँछौं आईफोन समाचार
सब भन्दा प्रख्यात र विवादास्पद उपन्यास, दोस्रो किनभने यो गैर-64-बिट उपकरणहरूको लागि उपलब्ध हुनेछैन, जुन आईओएस .9.3 ..XNUMX को साथ आउँनेछ जुन एप्पलले भनेको छ राती शिफ्ट। यो "रात परिवर्तन" ले हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याडको स्क्रिनको र mod्ग परिमार्जन गर्दछ ताकि त्यहाँ नीलो कम छ, ताकि हाम्रो शरीरले यो पहिले नै रात छ भनेर बुझ्दछ र यसैले हाम्रो सर्कडियन चक्रको सम्मान गर्दछ, जसले हामीलाई अझ सुत्न अनुमति दिनुहुन्छ। । तर के हामीसँग त्यस्तै प्रकार्य हुन सक्छ? हाम्रो म्याकमा? उत्तर हो हो, र आवश्यक सफ्टवेयर उही हो जुन गैर 64 XNUMX-बिट आईओएस उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन्, जबसम्म तिनीहरू जेलब्रोकन छन्।
यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि म के बारेमा कुरा गर्दैछु f.lux। यद्यपि एप्पलले नाईट शिफ्ट प्रस्तुतीकरण पृष्ठमा भनेको कुरा सत्य छ र हामी मध्ये धेरैले आईओएस .9.3 ..XNUMX को बिटालाई धन्यवादको बारेमा पत्ता लगाएका छौं, यो अधिक संभावना छ कि टिम कुकले चलाउने कम्पनी f.lux अनुप्रयोगमा आधारित छ। तपाईंको आफ्नै प्रणाली सिर्जना गर्नुहोस्। आईओएसमा अपरेशन एकदम मिल्दोजुल्दो छ, एप्पलले कम्पनीको साथ लाइनमा डिजाइनको साथ सेटिंग्समा आफ्नो रातको शिफ्ट थप गरेको छ, तर दुबै स्क्रिनको र change परिवर्तन गर्दछ जब यो रातमा अन्धकार हुन्छ। क्षेत्र।
1 ओएस एक्समा नाइट शिफ्ट कसरी गर्ने
2 F.lux कसरी प्रयोग गर्ने
ओएस एक्समा नाइट शिफ्ट कसरी गर्ने
यो सरल हुन सक्दैन, तर हामी यसलाई क्रमशः विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं।
हामी सफारी खोल्छौं र पृष्ठमा जान्छौं justgetflux.com.
हामी क्लिक गर्दछौं F.lux डाउनलोड गर्नुहोस्.
हामी डाउनलोड फोल्डरमा जान्छौं र फाइलमा डबल क्लिक गर्दछौं Flux.zip यसलाई अनजिप गर्न
अब हामी केवल फ्लक्स फाइलमा ड्र्याग गर्न पर्छ अनुप्रयोग फोल्डर यसलाई स्थापना गर्न।
F.lux कसरी प्रयोग गर्ने
F.lux को प्रयोग पनि धेरै सजिलो छ। वास्तवमा तपाईले यसलाई खोल्ने बित्तिकै, यो काम गर्न पहिले नै कन्फिगर गरिएको छ, तर हामी सधैं हाम्रो प्राथमिकताहरूको आधारमा केही मान परिमार्जन गर्न सक्दछौं।
सायद सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा के हो जुन नम्बर १ मार्क गरीएको छ: कम्प्युटरको साथ f.lux सुरू गर्नुहोस्। यस प्रकारको अनुप्रयोग प्रयोग गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ यसलाई बिना हेलौं, त्यसैले मैले यसलाई मार्क गरें।
त्यसो भए f.lux लाई थाहा हुन्छ जब यो हाम्रो क्षेत्रमा अँध्यारो हुन्छ, यसले यसलाई इन्टरनेट प्रयोग गरेर जाँच गर्दछ। त्यसकारण, सेक्सन २ मा अंकित गरीएको, हाम्रो GPS निर्देशांक। यदि तिनीहरू कुनै कारणले देखा पर्दैन भने, हामीले केवल कम्पास आईकनमा छुनु पर्छ वा हाम्रो क्षेत्र खोजी गर्नुपर्नेछ।
हामी कहिले उठ्छौं हामी तपाईलाई भन्न सक्दछौं, तर यसले मात्र रेखाचित्र परिमार्जन गर्दछ जसले स्क्रिनमा र colors्गहरू दिनको दिनमा कस्तो हुन्छ भनेर बताउँछ। मैले यसलाई त्यस्तै छोडेको छु।
हामीसँग तीन ट्याबहरू छन्: डेटाइम, सूर्यास्त, र सुत्ने समय। यी ट्याबहरू केवल यति मात्र हामी गर्न सक्दछौं र see्ग हेर्नुहोस् जुन योमा परिवर्तन हुनेछ ती घण्टामा। माथिको क्याप्चरले रंगहरू लिन सक्दैन, तर यो अधिक सुन्तला रंगको हुनुपर्दछ। यदि यो हामीले चाहेको रंग छैन भने, हामी मानहरू परिवर्तन गर्न सक्छौं या त स्लाइडर सार्दै वा मेनू प्रदर्शन गरेर सिफारिश गरिएका रंगहरू र पूर्व-कन्फिगर गरिएको टोन छनौट गर्दै।
र f.lux को बारे मा राम्रो कुरा यो विन्डोज र लिनक्स को लागी पनि उपलब्ध छ। त्यसैले अब हामीसँग यस सर्काडियन चक्रलाई आदर गर्न कुनै बहाना छैन। F.lux र नाइट शिफ्टको साथ हामी अझ सुत्नेछौं। तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » के तपाइँ आफ्नो म्याकमा आईओएस .9.3 ..XNUMX मा नाईट शिफ्ट प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ? हामी कसरी देखाउँछौं
त्यसोभए तिनीहरू भन्छन कि यो गुगल हो जसले आईओएस हाहाहाबाट एन्ड्रोइडमा सुविधाहरू ल्याउँदछ जब यो एप्पल हो जसले उनीहरूलाई एन्ड्रोइडबाट आईओएसमा ल्याउँछ, सबैभन्दा रमाईलो कुरा यो हो कि यो आईओएस in। In मा सब भन्दा उल्लेखनीय समाचारहरू मध्ये एक हो जुन हाम्रो लागि एन्ड्रोइडमा पुरानो हो। ।
Eximorph लाई जवाफ दिनुहोस्
एन्ड्रोइडको कुनै संस्करणसँग यो पूर्वनिर्धारित छैन, f.lux यसको विन्डोज, एन्ड्रोइड, ओएस एक्स र हालसालै आईओएसको लागि यसको अनुप्रयोग छ, यदि एप्पलले कसैलाई यस पटक नक्कल गरेको छ भने यो Google, र f.lux मा रहेको छैन। खुला स्रोत हो।
सामसु tablets ट्याबलेटले यसलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा पढ्ने मोडको रूपमा ल्याउँदछ। सायनोजेनमोडले यो ल्याउँदछ, कि, स्यानोजेनमोडसँग बेचिएका सबै फोनहरू यसलाई पूर्वनिर्धारित हुन्छ। यति लामो समय पछि सेब आईओएस .9.3 ..XNUMX मा समाहित गर्दछ र तिनीहरूले एन्ड्रोइड हाहाहामा प्रतिलिपि गर्दैनन्। तिनीहरू सधैं कुकुरको पुच्छर हहाहा जस्तो छन्।
र जहाँसम्म मलाई थाहा छ, पठन मोड सामसु inमा आकाशगंगा s4 (२०१)) बाट फेला पर्‍यो।
नमस्कार, एक्जिमोर्फ। के म देख्न सक्षम भएको छु, योसँग यसको केहि गर्नका लागि केही पनि छैन। यो यस्तो होइन कि यसले र theहरू परिवर्तन गर्दछ ताकि हामी अझ राम्ररी पढ्न सक्दछौं, यो हो कि यसले र colors्ग परिवर्तन गर्दछ र शरीरलाई संकेत गर्दछ कि रात हो। त्यो "सर्काडियन" चक्र के हो भनेर हो।
प्रश्न निम्न छ: यदि हामी निलो र colorsहरू (सामान्य) को साथ एक स्क्रिनमा हेर्छौं, शरीरले बुझ्दछ कि यो दिनको समय हो भने पनि ११ बेलुका छ भने। शरीर रातको लागि तयारी गर्दैन, र त्यसपछि यो निदाउन हामीलाई बढी गाह्रो हुन्छ। यदि स्क्रिनले ती र colorsहरू परिवर्तन गर्दछ भने, यसले शरीरलाई बेवकूफ बनाउँदैन, बरु यसलाई "रातो" छ भनेर "थाहा" छ, निद्राको लागि तयारी गर्दछ र त्यसपछि हामी अझ सुत्छौं।
त्यो पढ्ने मोड जुन तपाईं उल्लेख गर्नुहुन्छ, म यसलाई सफारीमा प्रयोग गर्दैछु जुन मैले यसलाई प्रयोग गरें, दुबै आईओएस र ओएस एक्समा।
सायानोजेनमोडले उस्तै चीज गर्दछ। यो दिनको र रात दुबै राम्रा सुत्ने वा राम्रो पढ्न प्रयोग गरिन्छ, यो अझै पनि समान अवधारणा हो र एप्पल एन्ड्रोइडले सबै कुराबाट प्रेरित हुन जारी राख्दछ।
योसँग यसको केही सरोकार छैन, म दोहोर्‍याउँछु। तपाई के भन्छन् कि टेक्स्ट राम्रोसँग हेर्नको लागि स्क्रिन परिवर्तन हुन्छ। F.lux (र नाइट शिफ्ट) ले के गर्दछ स्क्रीनबाट निलो र removeहरू हटाउँदछ ताकि शरीरलाई थाहा हुन्छ कि यो रात हो। गलत भन्यो, तर त्यसो त तपाईंले बुझ्नुभयो, यदि ती रंगहरू परिवर्तन भएन भने, रातमा हामीसँग थोरै जेट लग हुन्छ। के यो र color्ग परिवर्तनको साथ अभिप्रायले शरीरलाई यो थाहा हुन्छ कि यो रातमा गरिरहेको छ। यदि तपाइँ सामान्य स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ भने, शरीरको लागि रात तपाइँले हेर्न छोड्नुहुने क्षण सुरु हुन्छ। एकदम कमसेकम, यसले तपाईंलाई सुतेको लागि अर्को घण्टा लिन्छ। यसको राम्रोसँग स्क्रिन र टेक्स्ट हेर्दै केही गर्नुपर्दैन।
म मेरो टिप्पणी सम्पादन गर्दछु: Cyanogen कुरा LiveDisplay छ। मैले पढेको जस्तै, यो उस्तै हो। उनीहरूले स्वीकार गर्छन् कि यो f.lux बाट बाहिर आउँछ र २०१ 2015 मा आएको हो। सामसु not चीज एप्पलले प्रयोग गर्ने रिडर दृश्य हो। जे भए पनि, f.lux दुबै भन्दा पहिले र जेलब्रोकन आईओएस भन्दा लामो छ। त्यसकारण, एप्पल "फेरि एक पटक जेल ब्रेकमा निर्भर गर्दछ," एन्ड्रोइड होइन।
Eximorph, Android र विशेष गरी सामसुले जीवनमा केहि आविष्कार गरेको छैन। गुगलले युनिक्समा आधारित एन्ड्रोइड बनाईएको छ जुन s० को दशकदेखि नै हो, र सामसुung मात्र सबै ब्रान्डको उत्तम लिने र उनीहरूलाई एक खराब उपकरणमा सँगै राख्नको लागि समर्पित छ।
तपाईं प्रकारको थोरै भ्रमित हुनुहुन्छ। तपाईंले भर्खर एन्ड्रोइडसँग विन्डोज मोबाईल स्ट्यान्डर्डलाई हेर्नुहोस र तुलना गर्नुपर्नेछ उनीहरूसँग कसरी एक अर्कासँग यस्तै प्रकारको छ भनेर बुझ्न। मैले पहिले भनेको कुरामा फर्केर जाँदा, यसले सेपले प्रयोग गर्ने उद्देश्यको लागि फरक पार्दैन, यो समान अवधारणा हो। एप्पल एन्ड्रोइड बाट प्रेरित हुन जारी छ।
एप्पल जेल ब्रेक द्वारा प्रेरित छ। २०० https://justgetflux.com/news/2016/01/14/apple.html र त्यस पछि यो आईओएस मा छ।
एप्पलले गर्भपात केन्द्रहरूको खोजी गरेर सिरी समस्या "फिक्स" गर्दछ